!! #MOI #ကေအိုင်အေအဖွဲ့မှ #ဆက်ကြေးတောင်းပြီး #အသံမိုင်းဖြင့် ဖောက်ခွဲခြိမ်းခြောက်မှုပြုလုပ် | democracy for burma
!! #MOI #ကေအိုင်အေအဖွဲ့မှ #ဆက်ကြေးတောင်းပြီး #အသံမိုင်းဖြင့် ဖောက်ခွဲခြိမ်းခြောက်မှုပြုလုပ်
tags: နေပြည်တော် ဇူလိုင် ၂၁, Burma, KIA GROUP, MOI, Myanmar
ကေအိုင်အေအဖွဲ့မှ ဆက်ကြေးတောင်းပြီး အသံမိုင်းဖြင့် ဖောက်ခွဲခြိမ်းခြောက်မှုပြုလုပ်
နေပြည်တော် ဇူလိုင် ၂၁
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) မူဆယ်မြို့ ဟိုနားရပ်ကွက်၊ မြို့ပတ်လမ်း အကွက်အမှတ်(၁၀၀)တွင် ဇူလိုင် ၂၀ ရက် ည ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်ခန့်က ပေါက်ကွဲသံ တစ်ချက်ကြားသဖြင့် နယ်မြေခံတပ်မှ သွားရောက်စစ်ဆေးရာ ဒေါ်အေးယေ့ ၄၆ နှစ် ပိုင်ဆိုင်သော ဆန်ဂိုဒေါင်ရှိ အုတ်တံတိုင်းအောက်ခြေတွင် အလျား ၈ လက်မ နှင့် အနံ ၃ လက်မခန့်ရှိ အပေါက်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
ဖြစ်စဉ်အား စိစစ်ရာ ၎င်းဆန်ဂိုဒေါင်အနီး၌ ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ(၄)တံဆိပ်ပါ စာရွက်ဖြင့် ဖုန်းနံပါတ်များရေးသားထားပြီး ဇူလိုင် ၁၇ ရက်နောက်ဆုံးထား ဆက်သွယ်ပြီး ဆက်ကြေးပေးရန် ရေးသားထားမှုကိုတွေ့ရှိရကြောင်း၊ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူမှ ဆက်သွယ်ခြင်းမရှိသဖြင့် အေအိုင်အေအဖွဲ့မှ အသံမိုင်းထောင် ဖောက်ခွဲခြိမ်းခြောက် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ (မြ၀တီ)
ဓာတ်ပုံ = မြဝတီ
from → Burma, KIA, MOI, MYANMAR
← !! #RSO #မောင်တော #ပညာရေးဌာန #လုံခြုံရေးသတိပေးစာ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာ။
!! #သစ်ခိုးထုတ်မှုဖြင့် #တရားစွဲခံထားရသော #တရုတ်နိုင်ငံသားအချို့ →